विश्व स्वास्थ्य दिवस : नेपालको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक, ६० प्रतिशत नेपाली कुनै न कुनै रोगबाट प्रभावित ! « News24 : Premium News Channel
विश्व स्वास्थ्य दिवस : नेपालको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक, ६० प्रतिशत नेपाली कुनै न कुनै रोगबाट प्रभावित !
काठमाडौं । बुधबार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा नेपालको जनस्वास्थ्य अवस्था भने नाजुक देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानिस स्वस्थ्य हुनका लागि शारीरिक, मानसिक र सामाजिक तीनवटै पक्ष स्वस्थ हुनुपर्छ ।
तर, नेपालको समग्र स्वास्थ्य स्थिति हेर्ने हो भने ६० प्रतिशत मानिस रोगी भएको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा समान पहुँच भनेपनि ब्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन ।
एकातिर दीर्घरोगीहरुको संख्या बढ्दो छ । अर्कोतिर उपचार पाउन सास्ती छ । विपन्न वर्गलाई उपचारमा सरकारी सहयोग दिने भने पनि त्यो ब्यवहारमा अनुभूति गर्न सकिएको छैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले १० हजार नागरिकका लागि ५ जना चिकित्सक चाहिने मापदण्ड तोकेको छ । तर, नेपालमा कति विरामीलाई कति जना चिकित्सक आवश्यक हो भन्ने नीति नै छैन ।
मुटु, मृगौला, क्यान्सर लगायत ८ जटिल रोगको लागि १ लाखदेखि ४ लाख आर्थिक सहयोग दिने भनेपनि उक्त रोगको उपचारको लागि त्यो रकम अपर्याप्त छ ।
पछिल्लो समय मधुमेह, उच्च रक्तचापका विरामी अधिकांश घरमा भेटिन्छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत अर्थात ७५ लाख मुटुरोगी छन् । वर्षेनी मुटु रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थको असर, वातावरणीय प्रदूषण, अत्याधिक मात्रामा विषादीको प्रयोग र आधुनिक किसिमको जीवनशैलीले प्रत्येक वर्ष २० हजार मानिसहरूले क्यान्सर रोगका कारण मृत्यु हुन्छ ।
मृगौला रोगका वार्षिक करिब ३ हजार विरामी थपिने गरेका छन् । नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवं गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।